I-Studio La Marina, enethala, eTarifa - I-Airbnb
I-Studio La Marina, enethala, eTarifa
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMarine
Xa iyi-104 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Isitudiyo esiphakathi (VFT/CA/04669), esitofotofo, sale mihla kunye netreyini enkulu enelanga, elungele ukuphumla ngexesha leholide eTarifa.
Ikwindawo ethe cwaka, uhamba nje imizuzu eyi-2 ukusuka kwidolophu endala yaseTarifa (indawo yokutyela nebhari) nemizuzu eyi-5 ukusuka elunxwemeni.
Isitudiyo, esitofotofo, sale mihla esine-terrace enkulu enelanga, elungele ukuphumla ngexesha leeholide zakho eTarifa.
Ikwindawo ethe cwaka, uhamba imizuzu eyi-2 ukusuka kwidolophu endala (iivenkile zokutyela kunye nebhari) kunye nemizuzu eyi-5 ukusuka elunxwemeni.
Istudiyo i-La Marina sisitudiyo esiyi-30, esine-terrace enkulu eyi-16. Yindawo efanelekileyo yokuza wonwabele iiholide zakho eTarifa kunye neqabane lakho, intsapho okanye umhlobo.
Isitudiyo sabucala, simalunga ne-30keleyo, sinetreyini enkulu eyi-16ylvania. Indawo efanelekileyo yokonwabela iiholide zakho kunye nomhlobo wakho, iqabane lakho...
Istudiyo sinendawo ye-30 m2, kunye ne-16 m2 terrace, indawo efanelekileyo yokuchitha iiholide zakho njengesibini, umhlobo...
I-wifi ekhawulezayo – i-104 Mbps
4.79 · Izimvo eziyi-139
* Isitudiyo saseLa Marina sikwindawo ethe cwaka. Indawo ekuyo yeyona ifanelekileyo, apho unokonwabela umoya nomlingo weTarifa kwimizuzu nje eyi-2 ukusuka kwi-Old Town nemizuzu eyi-5 ukusuka elunxwemeni lwayo oluhle lwaseLos Lances.
Unokuzifumana kufutshane kakhulu nendlu yakho:
- Ibhari - Indawo yokutyela,
- Iivenkile zezipho,
- Isikhululo sebhasi,
* Ikwindawo ethe cwaka, unokuyifumana kufutshane:
- Indawo yokutyela yeBar - Ivenkile yezipho,
- Isikhululo segesi
* Uza kufumana:
zokutyela, - Iivenkile ze-Souvenir, - Isikhululo sebhasi,
- Isikhululo segesi.
Inombolo yomthetho: VFT/CA/04669